Madaxii Sirdoonka Suudaan Oo iscasilaad ku dhawaaqay Wararkii Ugu Dambeeyay.
Hoggaamiyaha cusub ee wadanka Suudaan ayaa ku dhawaaqay in uu qaaday xaaladdii degdegga aheyd ee wadanka lagusoo rogay laba maalin kadib markii Inqilaab Melleteri lagu riday dowladdii uu madaxda ka ahaa Cumar Xasan Al Bashiir.
Jeneraal Cabdi Fataax Al Burhaan oo xalay loo magacaabay madaxa golaha KMG ah ee Suudaan ayaa shaaciyay in uu sameeyay isbedel lajaan qaadaya dalabaadka shacabka kacdoonka wada.
Al Burhaan ayaa amar ku bixiyay in lasii daayo dhammaan maxaabiista ku xiran xabsiyada wadanka Suudaan ee lagu qabtay Kacdoonka Afar Bilood jirsaday ee lagu doonayo in lagu rido nidaamka Melleteriga ah.
Taliska cusub ee talada lawareegay ayaa ugu baaqay hoggaamiyaasha hor boodaya kacdoonka shacbiga ah in ay isku diyaariyaan wadahadal isagoo amaanay sida shacabku uga dhiidhiyeen Nidaamkii Al Bashiir ee madaxa adkaa.
Dhinaca kale Taliyihii Sirdoonka Suudaan Ninka lagu magacaabo Salaax Qoosh ayaa iska casilay xilkii uu hayay, Golaha Melleteriga KMG ah ayaa sheegay in ay aqbaleen iscasilaadda Qoosh.
Jeneraal Salaax Qoosh ayaa kamid ahaa saraakiishii gacanta midig u ahaa Al Bashiir waxaana lagu xusuustaa go'aannadii adkaa ee uu ka qaatay kacdoonnada wadanka ka socda isagoona lagu eedeeyay in bishii lasoo dhaafay uu kulan laqaatay madaxa sirdoonka Yahuudda.